Iindlela ezilula nezilula zeFotoshop ukulungisa iifoto | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Photoshop, Tutorials
Lo uhlelo lokuhlela lwemifanekiso Ngamanye amaxesha kuyothusa kubaqalayo, nangona kunjalo la maqhinga alandelayo aya kukunceda funda ukufunda i-Photoshop. Ukuba ufuna ukulungisa ifoto yosapho eyonakaliswe ngutata wakho okanye ifoto ethi ngenxa yokukhanya okungalunganga umbala wefoto ube mbi, apha Siza kukubonisa ukuba ungayenza njani.
1 Susa izinto
2 Susa ukungafezeki kwiifoto zakho
3 Lahla imibala enemibala engaqhelekanga
4 Khupha abantu abakulo mfanekiso ebumnyameni
5 Yongeza umbala we-sepia okanye omnye umthunzi
6 Guqula umbala
7 Gxila kwindawo enye
Ukwenza oko kulula kakhulu ngesixhobo Gcwalisa ngokuKhangela uMxholo, nangona oku kungasoloko kusebenza ngokugqibeleleyo.
Sebenzisa isixhobo seLasso uku khetha ujikeleze into ethile kunye nenxalenye esezantsi, emva koko uye ku Uhlobo > Gcwalisa emva koko ukhethe Ngokomxholo kwimenyu ehlayo. Kuya kufuneka ubambe phantsi Ukutshatisa umbala.
Susa ukungafezeki kwiifoto zakho
El Gcwalisa ngokuKhangela uMxholo Ayisiyiyo eyona nto iphambili smart ebonakalayo kwikhathalogu yeFotohop, ikwakhona Indawo yokulungisa ibrashi ezilungele ukuphinda ubambe ukungangqinelani okuncinci, amanqaku kunye namabala usebenzisa lonke ulwazi olunalo kumfanekiso. Ungayikhetha kwibhokisi yezixhobo, uyakuyiqonda ukuba yeyona inembonakalo yoncedo lwebhendi, emva koko peyinta amabala apho ukungafezeki kukhona ukuze ndikwazi ukuzisusa.
Lahla imibala enemibala engaqhelekanga
Ngesicelo seFotohop unokukhawuleza ukulungisa i fii-otographs ezinombala ongaqhelekanga, ezibangelwa ikakhulu kukukhanya okungalunganga. Ukuyicombulula kufuneka uye ku Fungisa > Useto > Umbala womdlalo kwaye ucofe iqhosha Ungathathi cala, Ukugqiba sicofa OK. Ayisebenzi ngokufanelekileyo kuzo zonke iimekoNangona kunjalo, kufanelekile ukuba ikwazi ukuhambisa iziphumo ezilungileyo ixesha elininzi ngaphandle kwesidingo sokuchukumisa ngesandla.
Khupha abantu abakulo mfanekiso ebumnyameni
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo yile ukuthatha umfanekiso wabantu abanelanga njengemvelaphi, oku kuhlala kubangela ukuba ubuso bangaphambili bube mnyama mnyama. Ukulungisa ezi ntlobo zemifanekiso, kuya kufuneka ucofe Fungisa > Useto kwaye emva koko kufuneka ucofe Isithunzi / Isibane. Nje ukuba kwenziwe oku, ukulungisa ezona ndawo zimnyama kuya kufuneka usebenzise isilayida ngasentla.
Kusenokwenzeka ukuba kunjalo Kuya kufuneka wandise ukukhanya komfanekiso.
Yongeza umbala we-sepia okanye omnye umthunzi
Ukongeza imibala kwimifanekiso kulula kakhulu, kufuneka ucofe nje apho ibonakala khona Yenza umaleko omtsha wokugcwalisa okanye ngaphakathi Ukulunga ebonakala kwidayalog Uluhlu, emva koko ucofe Mnyama nomhlophe. Nje ukuba ugqibile, khetha ibhokisi Ithoni ifunyenwe kwiwindow ephumayo.
Ngokuzenzekelayo yi-sepia, nangona kunjalo, ungayitshintsha ngokukhetha enye ithoni yezo zibonakala ngaphakathi kwebhokisi ekufuphi. Nangona zikho ezinye iindlela, zezona zilula kwaye zichanekile kwezi zifumanekayo.
Indlela ye tshintsha iithoni ezimiselweyo ngaphandle kokwenza ukhetho isebenzisa i-hue kunye nohlengahlengiso lokugcwalisa. Ngale nto kuya kufuneka uye Cloak > Umaleko omtsha wolungelelwaniso emva koko ukhethe Hue / ukugcwala. Emva koko kuya kufuneka ucofe umnwe wakho kwaye khetha kwiscreen umbala ofuna ukuwutshintsha.
Xa uyenzile, unokulungisa umbala kwaye umbala kuphela, ngokulungelelanisa i-hue, ukugcwala kunye nokuKhanya.
Gxila kwindawo enye
Ukuba ukhetha ifoto kwaye ukhethe uku lokucoca ulwelo, Fiphaza Igalari kwaye emva koko ucofe Ukugxininisa iris, Uya kuba nakho ukugxila kuphela kwinto engaphakathi komfanekiso ngelixa yonke enye ifoto icace gca.
Njengoko ubona, oku kulula kakhulu kunokuba kubonakala kwaye awudingi ukuba yingcali kwesi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Amaqhinga e-Photoshop aya kukunceda ukulungisa iziphene kwiifoto zakho
URuben DG sitsho
Phendula kuRuben DG
Iilensi zeris sitsho
Phendula kwi-Iris Lens
Ukhuphiswano lwehlabathi lwefashoni yedijithali